Special Yakagadzirirwa Valve Machining
Valve yekugadzira mutsara wekugadzira
CNC Drilling uye Milling Machine
Gantry Type CNC Drilling uye Milling Machine
Yakagadziriswa Beam CNC Drilling uye Milling Machine
CNC Yakakwira Kumhanyisa Kuchera Uye Kugaya Machine
Center Drive lathe For Thin-walled chubhu
Machina Akakosha Akanyanya Kudhura Kupfuura General-Chinangwa CNC Machine?
Kune vatengi vekare vanoziva Oturn Machinery, chimiro chekambani yedu mumakore achangopfuura chakanyanya kurerekera kumichina yakakosha, pane general machining nzvimbo kana CNC lathes. Mumhinduro dzekutengesa mumakore mashoma apfuura, takanzwa zvakajeka kuti kucherechedzwa kwevatengi kwespe...
Diki Vertical Lathe, Unove Sei Kushanda Kwekushanda?
Diki vertical CNC lathes anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekudzivirira, zvigadzirwa zvemagetsi, mekiniki zvikamu, aerospace uye mamwe minda, kunyanya kugadzirisa kutaridzika kwezvikamu zvakasiyana, kunyanya zvidiki-saizi workpieces yakakodzera kugadzirwa kwehuwandu. Kana iwe uchida kuti zvikamu zvako zvive nekugadzirisa effici ...
Otomatiki Kugadzira Mutsetse weKaviri-kuguma CNC Lathe YeAxle
Isu takagadzira iyo SCK309S nhevedzano yekaviri-magumo CNC lathes emota maekisi uye maekisi echitima. Kuti tigadzirise dambudziko rekurodha nekuburitsa maekisi, isu takanyatso suma iyi otomatiki unit kuti vatengi vasarudze. Iyo ine SCK309S yakatevedzana axle CNC lathe + otomatiki mubhadharo ...
Musiyano uripo pakati peHDMT CNC Matatu Chiso Chekushandura Muchina uye yechinyakare vharafu muchina
Kubudirira Muchina wekugadzira vharafu unoda kugadzirisa workpiece katatu, uye inoda kusungirirwa uye kugadziriswa katatu katatu, nepo HDMT CNC Three Face Turning Machine inogona kugadzirisa zviso zvitatu panguva imwe chete, uye workpiece inogona kuva. inopedzwa chete...
Prospect Analysis yeHorizontal CNC Drilling uye Milling Machine
Horizontal CNC yekuchera uye muchina wekugayira wakagadzirirwa kukurumidza kuchera maworkpiece ane hukuru pamusoro pe800mm muzvikamu zvitatu zvemavharuvhu / zvinoderedza, izvo zvinoda kutenderera indexing mune mana-mativi kana akawanda-mativi machining. Mazhinji emakomba emhando yevharuvhu-mhando ye polyhedron zvikamu zvisingasviki makumi mashanu ...
Stator uye jenareta Chivharo cheMarori Ari Machining Neanopesana Dual-Spindle CNC Lathe
Takagamuchira kubvunza kubva kune mutengi nguva pfupi yapfuura. Mutengi akataura kuti akaona CNC mbiri-musoro lathe pawebhusaiti yedu yepamutemo uye akaifarira zvikuru, uye akagovana nesu mifananidzo. Iyo dhizaini inoratidza kuti workpiece ndiyo stator uye jenareta chivharo chemarori nemotokari. The...
Sarudza mhinduro yakakodzera pane iyo inodhura mhinduro yekugadzirisa pombi
Mumwe mutengi wekare anobva kuTurkey akaunza mutengi aigadzira mapaipi. Vanoda yeEuropean-mhando CNC pombi inoruka machira zvakanyanya nemutengo wakakwira. Mushure mekunge vataura nesu uye vakabva vaona pfungwa yavo isiriyo, muchina wekuEurope haisiriyo sarudzo yakanyanya kunaka. ivo. Muchokwadi, kune imwe e ...
Dhonza Zvakajairwa, Munda Wese Une Tenzi Wawo - CNC Drilling uye Milling Machine
Kana vatengi vakatibata, vanoshungurudzwa nemakwikwi ekubudirira pakati pevezera ravo.Pakutanga kwekugadzwa kwefekitari, vatengi vakashandisa radial drilling muchina kugadzirisa workpieces.Nekuzivikanwa kwemichina yeCNC, akatsiva CNC vertical machining center. pro...
90% Yevagadziri veVaruvha Havazive Iyo Yakanyanya-Kushanda Kwevhavha Magadzirirwo Nzira.
Makore mashoma apfuura, takashanyira mutengi aive ashanda fekitori yevharuvhu muIran kwemakore mazhinji.Pakutanga kwekugadzwa kwefekitori yavo, maodha mazhinji akazadzikiswa kuburikidza nekutengesa kunze. Chikamu chiduku chete chazvo chinogadzirwa uye chinogadziriswa nefekitari pachayo. Nekuwedzera kwef...
Wakasarudza muchina wakakodzera wekugadzirisa mavharuvhu makuru?
Izvi zvinobvawo pamakore edu mazhinji eruzivo muindasitiri mavharuvhu.Hatingove neketani yakakwana yekugovera, uye zvakare tine nhamba huru yezviitiko zvevatengi mumusika.Kushanya kwegore rose kwevatengi kwakatipa mazano ari nani uye kunzwisisa. iwo epamusoro pekugadzirisa mazano e ...
Ndeupi Musiyano Uripo Pakati Idzi Maviri Type Pipe Threading Lathe?
Kune Pipe Threading Lathes, vatengi vakawanda vakajaira kutsvaga modhi yemuchina pavanenge vachitsvaga. Semuyenzaniso, iwo mamodhi emuchina atinowanzo kuona ndeye QK1313/QK1319/QK1322/Qk1327/QK1335/QK1343 pamusika. is QK1315/QK1320/QK1323/Qk1328/QK1...
Mhinduro kubva ina-Station Flange Drilling Machine Mutengi
na admin pa 21-08-31
Denda iri mukupera kwa2019 rakonzera kuti mafekitori mazhinji atadze kuisa mukugadzirwa kwakajairwa kwenguva yakareba, senge fekitori yekugadzira flange muWenzhou China yatataura nhasi. Kune vanamuzvinabhizinesi vanogara vachishanyira China, vanogona kuziva Wenzhou, guta rine manufac akagadziridzwa ...
12345 Zvinotevera > >> Peji 1/5
Kero 904#,Haida Building,Tongji Road,Jiangbei District,Ningbo,China